Nduku na-eto eto nke mpaghara Ryazan - magazin "Potato System"
Ozi kacha ọhụrụ
Mmekọrịta nke German Mkpụrụ: ọdịnala dị mma nke German maka ndị na-akụ poteto Russia
Otu ụlọ ọrụ "Ebube na nduku"
Nhazi nke nchekwa
Ozuzo na nkpuru nkpuru
Nduku na-eto eto na mpaghara Ryazan
в Mpaghara, Akụkọ mpaghara
Ókèala mpaghara: 39.6 puku square. Km
Ọnụ ọgụgụ: 1 ndị mmadụ, nke 135% bi n'obodo.
ógbè a dị n'etiti etiti mba Europe na Russia, ọ bụ akụkụ nke Central Federal District na Central Economic Region nke Russian Federation.
Oge Ihu Igwe: otutu ebe.
Nkezi n'ọnwa Jenụwarị bụ 10 Celsius С, Julaị + 20 Celsius On Na nkezi, 500 mmiri na-ada kwa afọ (25-30% n'ụdị snow).
Mpaghara oru ubi: 2323,3 puku ha, gụnyere ala apịtị - 1468,1 puku ha. Dabere na Ryazanstat, mpaghara a kụrụ na ụdị ugbo niile na 2014 bụ 811,3 puku ha, nke bụ 4,0% erughị ihe ọkụkụ nke afọ 2013.
Nduku bu ahia nke anyi kwesiri iji bulite uru nke mbu!
Ajụjụ ọnụ nke Mịnịsta na-ahụ maka Ọrụ Ugbo na nri nke mpaghara Ryazan Boris Viktorovich Shemyakin.
- Boris Viktorovich, mpaghara Ryazan abụwo onye ama ama maka poteto ya na Russia. Gwa anyị ntakịrị gbasara “akụkọ nduku” mpaghara ahụ.
- Ọnọdụ agroclimatic na ọnọdụ obodo nke mpaghara Ryazan dị mma maka mmepụta nduku. Regiongbè a abụwo mgbe nile na-ebubata poteto dị iche iche na nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na n’ebe ugwu nke mba ahụ. Enwetara nnukwu owuwe ihe ubi nke nduku laa azụ na 1975 wee ruo 1750 puku tọn. Mgbe ahụ kụrụ mpaghara bụ 158 puku hectare, gụnyere na mkpokọta na ala ala - banyere 110 puku hectare, karịa n'ime afọ ndị a, naanị mpaghara Bryansk kụrụ ma mepụta nduku na mba ahụ. Site na mgbanwe nke mmekọrịta ndị ahịa, mpaghara a kụrụ akụ maka nduku belatara nke ukwuu, ala enyemaka nke onwe aghọwo ndị na-emepụta ihe. Agbanyeghị, n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, n'ihi mmata nke itinye ego, mgbanwe agbanweela na ọkwa ọkwa ọhụụ dị mkpa.
- Kedu ka ị ga - esi mara ọkwa mmepe nduku na-eto eto na mpaghara ahụ?
- Mpaghara Ryazan bụ mpaghara nwere onwe ya na ụdị nri dị iche iche. Taa, mmepụta nduku bụ ugboro 2,5 karịa oriri.
Na 2014, mpaghara a kụrụ na mpaghara niile nke ugbo ruru 25,7 puku hectare, ihe dịka 20% n'ime ha - mpaghara mpaghara ụlọ ọrụ na ugbo, ebe a na-etokarị poteto site na iji teknụzụ ọgbara ọhụrụ. A na-eji akụrụngwa arụmọrụ dị elu, fatịlaịza ịnweta, ngwaahịa nchekwa osisi ebe a, mgbanwe dịgasị iche iche na mmeghari ohuru na-arụ n'oge. Yabụ, enwere nnukwu ọdịiche dị na rụzuru ma e jiri ya tụnyere atụmatụ ụlọ nke onwe: na 2014, mkpụrụ na ala nkeonwe bụ 142 c / ha, na ụlọ ọrụ ugbo - 195 c / ha.
Maka anyị, ndị a bụ obere onu ogugu: nduku owuwe ihe ubi ikpeazụ oge a na-emetụta ihu igwe na August, mgbe n'oge nọ n'ọrụ uto nke tubers e nwere mmiri mpe na abnormally elu okpomọkụ. Ma teknụzụ nke oge a na-eme ka o kwe omume ịkwụsị ọnọdụ ihu igwe na-adịghị mma. Otu ihe atụ nke a bụ LLC "AgroSoyuzSpassk", ebe ojiji nke teknụzụ ọgbara ọhụrụ na ịmịpu mmiri mere ka ọ nwee ike ịnakọta ihe karịrị puku tọn iri na itoolu nke poteto dị elu, mkpụrụ dị na mmiri karịrị 19 c / ha.
Taa, ịmị mkpụrụ nduku na ịmịpụta akwụkwọ nri bụ otu n’ime ọrụ pere mpe arụ ọrụ ugbo. Na ngwụcha afọ 2014, uru poteto dị na mpaghara ahụ karịrị 40%, uru ya rịrị elu ugboro anọ ma e jiri ya tụnyere 2013. Nke a na-akọwa ịma mma nke ụlọ ọrụ maka ndị na-etinye ego na-etinye ego ọ bụghị naanị na mmiri a na-agba mmiri n'oge a, kamakwa na mmepe nke ntọala nchekwa na nkwadebe tupu ire.
N'afọ 2015, ugbo ndị mpaghara na-eme atụmatụ ịbawanye mpaghara ahụ site na 0,5 puku ha, mpaghara nke ala ndị gbara mmiri ga-abawanye (site na 0,8 ruo 1,3 puku ha).
- you na-eme atụmatụ ịzụlite mkpụrụ gị?
- Nke a bụ ọrụ siri ike. Na mbụ, sistemụ na-arụ ọrụ nke ọma na-arụ ọrụ na mpaghara ahụ: ndị ọrụ mmepụta Ryazansem-Potato gụnyere ugbo ala iri na abụọ nke rụpụtara mkpụrụ ndị ọkachamara. Netwọk nke mpaghara semkhozes nyere mpaghara ugbo azụmahịa na mkpụrụ ọmụmụ.
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ndị na-akụ mkpụrụ akụ na-akụ mkpụrụ akụ na ụba na mpaghara Moscow na Samara, Republic of Belarus, Germany, na Netherlands. Agbanyeghị, afọ a, dabere na ntinye nke ọtụtụ ugbo, na ntọala nke SPC Luch na mpaghara Kasimovsky, MaryKlon LLC mepụtara, na-enwe atụmatụ ogologo oge iji guzobe mmepụta mkpụrụ akụ na-akụ etolite ruru 7 tọn. Enwere m olileanya na ka oge na-aga, ụlọ ọrụ ga-abụ onye a pụrụ ịdabere na onye na-eweta ngwaahịa ọ bụghị naanị maka ugbo nduku, kamakwa maka ịkọ ugbo.
- Gini ka i nwere ike ikwu banyere akụrụngwa nke ụlọ ọrụ: kedu oke mpaghara a na-enye storages nke oge a, ahịrị maka nkwadebe nduku nke nduku?
- Ahịa ahụ na-achọ oke mma nke ngwaahịa nduku na ngwaahịa nri, na-enweghị isi nke oge a maka nchekwa na nkwadebe nkwadebe ọkwa achọrọ agaghị enwe ike. Afọ ole na ole gara aga, Gọvanọ nke Mpaghara Ryazan, Oleg Kovalev, setịpụrụ ọrụ nke ịmepụta netwọk nke ụlọ ọrụ nchekwa nke oge a ka ugbo wee nwee ike ịchekwa ihe ọkụkụ ruo oge opupu ihe ubi wee ree ha na ọnụahịa kachasị mma. Taa, na ụlọ ọrụ ugbo na ugbo, ikike nchekwa nwere ihe karịrị 110 puku tọn nke nchekwa otu oge. Ndị a bụ ụlọ nduku iri atọ na isii na ụlọ ahịa akwụkwọ nri asatọ, nke na-echekwa nchekwa nke ihe ọkụkụ niile toro.
Nnukwu ndị na - emepụta dị ka Avangard LLC nke mpaghara Ryazan (ụlọ nduku 6 nwere ikike nke 9 puku tọn), mkpokọta ugbo Zaveta Ilyicha (ụlọ nkwakọba ihe ọkụkụ 3 maka puku puku tan 4,5 na ụlọ nkwakọba ihe oriri maka puku puku tan 1,2 na ngwa nwere friji kacha ọhụrụ) nwere ikike ọgbara ọhụrụ. akụrụngwa na ahịrị) na ugbo ha. Lenin, Kasimov district (ụlọ ahịa 4 kwa 8 puku tọn).
Etinyewo nnukwu ego itinye ego na imepụta ebe nchekwa ahụ. Yabụ, LLC “Ungor Agriculture” na-arụ ọrụ ngo iji wuo ụlọ ahịa ihe oriri nke nwere friji na akụrụngwa ruru puku 49 na Rybnoye, a webatara usoro mbu nke 7,5 puku tọn. Na mpaghara Spassky, Agrosoyuz-Spassk na-ewu ụlọ maka ebe nchekwa na isi nhazi nduku na akwụkwọ nri (ịhazi, mmezi, ịsacha, nchịkọta). Ihe oru ugbo a na Shilovsky na-ewulite ebe nchekwa ya: oru ngo a na-enye maka owuwu nke ogige di nari puku iri, etinyewo ebe nchekwa abuo maka puku ise na puku ise. N'ime afọ atọ sochirinụ, ihe dị ka ụlọ ọrụ iri na-ezube iwu ụlọ nchekwa ọhụrụ, gbasaa ma mee ka ihe owuwu dị ugbu a dị.
- Enwere ụlọ ọrụ nhazi nduku na oblast (ma ọ bụ atụmatụ maka okike ha)?
- Otu n'ime ụlọ ọrụ na-arụpụta nduku nke oge a na mba ahụ na-arụ ọrụ n'ókèala mpaghara Ryazan
- CJSC "Factlọ Ọrụ Nri" Miloslavsky ", ọ bụ akụkụ nke Azụmaahịa na Nrụpụta Ọrụ" Kuntsevo ". E nyere ọrụ izizi ozi na Jenụwarị 2011. Taa, akụrụngwa arụnyere na ụlọ ọrụ ahụ na-enye ohere imepụta ihe ruru kilogram 550 nke flakes nduku kwa elekere, nchekwa nduku maka puku 18 puku tọn na-arụ ọrụ.
A na-emepụta flakes na-enweghị ihe mgbakwunye, yana ekpomeekpo sitere n'okike na ngwaahịa akpọnwụghị akpọnwụ. A na-ere ngwaahịa PC Miloslavsky na Moscow na mpaghara Moscow, St. Petersburg, Vladimir, Tver, mpaghara Vologda, Krasnodar Territory, Siberia, Tatarstan, mba ndị dị anya na mba ndị ọzọ dị anya (Kazakhstan, Ukraine, Poland, Belgium, Chile, Brazil, Argentina) ) N’ọdịnihu, ha na-eme atụmatụ ịbawanye isi maka ịkwakọba poteto 4,2 na ike nke usoro nhazi ugboro abụọ.
N'afọ 2014, a na-ahazi puku tọn nduku 16,4, nke arụpụtara (7,6 puku tọn) na Ryazan Potato, bụ ụlọ ọrụ ọrụ ugbo. Osisi ahụ zụtakwara akụrụngwa sitere n'ugbo ndị ọzọ na mpaghara ahụ. Ọnụnọ nke nnukwu processor dị otú a na mpaghara na-eme ka ndị ọrụ ugbo nwee ahịa, gụnyere obere nduku.
- Kedu otu esi edozi nsogbu nke ndị ọrụ mkpara na ụlọ ọrụ?
- staffing bụ ihe dị mkpa maka mmepe nke ọ bụghị naanị na nduku na-eto eto, kama ụlọ ọrụ ugbo niile. The Ryazan State Agrotechnological University aha ya bụ V.I. P.A. Kostychev na ihe karịrị 15 pụrụ iche agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ.
N'ime afọ abụọ gara aga, anyị enweela ezigbo ọnọdụ n'ịdọrọ ndị ntorobịa: na 2014, ihe karịrị ndị ọkachamara na-eto eto 100 bịara ọrụ na ụlọ ọrụ ugbo. Emebere nke a site na mmejuputa atumatu mmepe obodo, dika ulo e wuru (nkea n’aho-iri-isii natara nzi nke ndi mmadu n’iile rue 90% nke uru ya) ma ewulite ihe ime obodo, a na-ewulite obodo niile nke mmepe di omimi. Maka ndị ọkachamara na-eto eto, otu oge (92 rubles) na ntinye ego kwa ọnwa (15 rubles) dị irè na afọ atọ mbụ nke ọrụ.
Ndị ọrụ nkịtị na nnukwu ụlọ ọrụ agro-ụlọ ọrụ kwesịrị inwe obi ike n'ọdịnihu, nke a ga-ekwe omume mgbe ndị mmadụ na-enweta ezigbo ụgwọ ọrụ maka ọrụ ha. Taa, na mpaghara Ryazan, uto ụgwọ ọrụ bụ otu n'ime ọnọdụ maka ugbo iji nweta enyemaka site na mmefu ego. N'ihi usoro a, na 2014 ọ ga - ekwe omume ị nweta mmụba na ụgwọ ọrụ na ụlọ ọrụ site na 13,9% ma e jiri ya tụnyere 2013 (na ụlọ ọrụ ugbo ọ ruru 17342 rubles, nke bụ ezigbo akara ngosi maka mpaghara anyị).
- Kedu ugbo kachasị enye aka na mmepe nduku na-eto eto na mpaghara ahụ?
- N’etiti iri atọ kachasị mma na nduku na Russia bụ ugbo mkpokọta akpọrọ Lenin nke mpaghara Kasimovsky. Otu onyinye dị ukwuu maka mmepe nduku na-eto eto na mpaghara a bụ nke Kasimovsky Zavety Ilyich na-arụkọ ọrụ ọnụ, Ryazansky Avangard LLC, Ryazan Potato CJSC na mpaghara Miloslavsky, yana ugbo ọhụrụ guzobere - AgroSoyuzSpassk LLC na Agroholding Shilovsky LLC.
- Gwa anyị gbasara atụmatụ mpaghara ahụ maka mmepe nduku na-eto eto. Olee ọrụ ndị a na-arụ ugbu a?
Ugbo a na-akpọkọtara aha ya bụ Lenin, mpaghara Kasimovsky - Onye otu Russian Association of Potato Producers. Na-eji teknụzụ ịkọ ihe na Europe, ọrụ ahụ zuru oke (site na ịkọ ihe na ịtọpụta ihe ọkụkụ). Mpaghara n'okpuru poteto bụ hekta 320 kwa afọ. Na 2014, 9 tọn nduku na-egbute na nkezi mkpụrụ 281 c / ha. Ugbo ahihia nwere ebe nchekwa nke oge a, nke na-enye ohere ịchekwa na ire ihe ọkụkụ n'ime afọ.
Avangard LLC, mpaghara Ryazan - otu n'ime ụlọ ọrụ ugbo kachasị mma na Central Russia. Ugbo a di iche iche: ya na ugbo mmiri ara ehi ndi ozo na ndi na-eto eto, ihe nduku na ugbo na-eto eto. Na 2014, mpaghara n’okpuru nduku bụ hekta 327, e egbutela puku tọn asatọ na mkpụrụ 8 c / ha. Ugbo ahụ na-emepụta nri na mkpụrụ poteto.
Ugbo ezinụlọ Mansurov na mpaghara Klepikovsky e guzobere na 2007. Ijikọta sayensị na omume, ojiji nke fatịlaịza na mkpụrụ mkpụrụ osisi dị elu na-amị mkpụrụ. Ka ọ na-erule n’afọ 2014, mpaghara dum a kụrụ n’ugbo dị hekta 370, nke hekta narị anọ na iri anọ. Egbute 140 puku tọn na mkpụrụ nke 3 c / ha. Mkpụrụ nduku ndị ndị ọrụ ugbo na-emepụta adịghị mkpa mgbasa ozi pụrụ iche - ndị mmadụ na-abịakwara ha site na mpaghara ndị ọzọ nke Russia.
- Ntuziaka isi nke ọrụ n'ọdịnihu dị nso bụ mmụba nke oke acreage na mmepụta nduku, ihe okike nke ntọala nchekwa nke oge a, gụnyere na usoro nkwado. Anyị na-eme atụmatụ ịmịnyekwu teknụzụ ọgbara ọhụrụ maka nduku na-eto eto (a ga-etinye mmesi ike pụrụ iche na ojiji nke ogbugba mmiri n'ubi - ma obere na obere (ugbo). anyị kwesịrị iwulite ikike mbupụ anyị.
A bit nke akụkọ ihe mere eme
Na mbido narị afọ nke 511, ụdị poteto 50 ka etolitere n'ime obodo Kostino, mpaghara Ryvnovsky, mpaghara Ryazan. Ngha a ghaghaara na nchikota a ma ba uba ya na Nikolai Yakovlevich Nikitinsky, otu n’ime ndi mbu ndi Russia, ndi kwesiri ntukwasi obi banyere “ulo abuo nke abuo”, ​​onye kwenyere na o bu poteto nke ga-azoputa Russia site n’agu agu. Ndị na-ewu ewu na-akpọ Nikitinsky "eze nduku". Aha ahụ kwesiri. Ugbo ahụ na-eji mkpụrụ osisi enwetara site na ịgafe nke ụdị dị iche iche na nke ụlọ, na-agha ụgha maka ihe ubi na-anụbeghị (site na 150 ruo XNUMX okooko osisi kwa ọhịa).
N'afọ 1920, enyefela poteto nke ụdị "Nikitinsky" na ọdụ Korenevskaya (ugbu a Institutelọ Ọrụ Nnyocha Ọkụ Ugbo) a haziri ahazi nso na Moscow. Ya mere, na nduku Ryazan malitere akụkọ ihe mere eme nke nduku Soviet na-eto.
Nduku na-eto n'ime mpaghara Kursk
Nduku na-eto n'ime mpaghara Tambov
Nduku na-elekọta n'oge ntụpọ ma mgbe ọ gachara
Varietiesdị poteto ndị kachasị ewu ewu: kpakpando nke oge 2020
Mmepụta Nduku na Egypt: Ihe choro mbuba na-abawanye mmasi na Biopesticides
Otu ụlọ ọrụ "Agrotrade" na -ekwupụta asọmpi
Nduku na-eto n'ime mpaghara Novgorod
A ga -eme ezumike nduku na mpaghara Ivanovo
Mmiri mmiri ozuzo na -eyi ụkọ ụkọ ihe ubi
Belarus na -egbo mkpa ya maka poteto
Na-adịbeghị anya News
"Usoro nduku" magazin 12 +
Ozi Interregional na akwụkwọ nyocha gbasara ndị ọkachamara agribusiness
Llọ ọrụ LLC "Agrotrade"
Chọgharịa site na Otu
Magazine 2021 Magazine "Nduku System"
Mgbe ị na-eji ihe ọmụma na andntanetị na n'akwụkwọ e biri ebi (gụnyere tikeeti), a chọrọ njikọ gaa na saịtị nke "Usoro Nduku".